နေလင်းအောင်: ဘာသာပြန် အလေ့အကျင့်(၁)
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စတင်လေ့လာနေတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဘာသာပြန်အလေ့အကျင့် ရစေရန်၊ မြန်မာဘာသာ ပြိုင်ပွဲဝင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ ဘာသာပြန်ကောင်းသူများ ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဘာသာပြန်အလေ့အကျင့်ကဏ္ဍကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စာတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အောက်ပါအဆင့်များကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
(၁) ဘာသာပြန်ဆိုမည့် စာပိုဒ်ကို အနည်းဆုံး သုံးခေါက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပထမအကြိမ် နားမလည်ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းတွေ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ပိုပြီးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ တတိယအကြိမ်မှာဆိုရင်တော့ စာတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ ဆိုလိုချက်ကို အတော်အတန် နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စာတစ်လုံးချင်း၊ တစ်ကြောင်းချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှာ ဘာသာပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ဝါကျတွေက အဓိပ္ပါယ် ခက်ခဲတာမျိုး မပါပေမယ့် ရှေ့နောက်ဝါကျ ဆက်စပ်မှုကိုကြည့်ပြီး ဘာသာပြန်ဆိုရတာမျိုးပါ။
(၂) မိမိနားမလည်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အဘိဓာန်ထဲ ရှာကြည့်ပါ။ အချို့စကားလုံးတွဲတွေဟာ အီဒီယံ ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက် အီဒီယံ စာအုပ်ကောင်းကောင်း ဆောင်ထားပါ။ အဘိဓာန် အသုံးပြုရာမှာ စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး သုံးလေးအုပ်လောက်တော့ ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှသာ အဘိဓာန်တစ်အုပ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့စကားလုံးတွေဟာ ဘာသာပြန်ဆိုဖို့ အဆင်မချောဘူးဆိုရင် အခြားတစ်အုပ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပြောင်းလဲပြန်ဆိုနိုင်ဖို့ပါ။
(၃) စာတစ်ကြောင်းချင်း အဓိပ္ပါယ်နားလည်အောင် ကြိုးစားရင်း တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း နှုတ်ဖြင့် ပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ အားလုံးပြန်ဆိုဖို့ အဆင်ပြေတဲ့အခါ စာရွက်ကြမ်းမှာ ချရေးပါ။ ပြီးရင် ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ၊ ထောင့်နေတဲ့ဝါကျတွေ ပြင်ဆင်ပါ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို အထူးဂရုစိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး သုံးလေးခေါက်လောက် မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ ဖတ်ကောင်းတဲ့ ဘာသာပြန်စာမူတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၄) ပြန်ဆိုပေးထားတဲ့ စာမူနဲ့ မိမိတို့စာမူ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရင်း မိမိတို့ရဲ့ ဘာသာပြန်အမှားများ၊ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေပြီး အမှားထဲက သင်ခန်းစာယူပါ။ ဆရာကတော့ ခုမှ ဘာသာပြန်ကို လေ့လာလိုက်စားမယ့်သူ၊ ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စာတစ်ကြောင်းချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို တိုက်ရိုက်ပဲ ပြန်ဆိုပေးလိုက်တာပါ။
နောက်ဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ ဝေါဟာရများကို ကျက်မှတ်ထားပါ။ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝသူများကသာ စာမူများကို အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်၊ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်တာကြောင့်ပါ။
When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front-door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you."
(အနည်းဆုံး သုံးခေါက်လောက် အစအဆုံးဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်အရင် ပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ )
အသက်ခပ်ကြီးကြီး လက်သမားဆရာတစ်ဦးဟာ အလုပ်မှ အငြိမ်းစားယူဖို့(အနားယူဖို့) အဆင်သင့် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အလုပ်ရှင် ကန်ထရိုက်သူဌေးကို အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ အနားယူပြီး သူ့ဇနီးနဲ့အတူ အေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့၊ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖို့စတဲ့ သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အပတ်စဉ်ရမယ့်ဝင်ငွေ ရမှာမဟုတ်တော့ပေမယ့်လည်း အနားယူချင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ကန်ထရိုက်တာဟာ သူ့ရဲ့ အလုပ်သမားကောင်း ထွက်ခွာသွားတော့မှာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်း ခင်မင်မှုကိုထောက်ထားပြီး နောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံး တည်ဆောက်ပေးနိုင်သလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
လက်သမားဆရာဟာ တည်ဆောက်ပေးဖို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားသလို သူ့နှလုံးသားဟာလည်း အလုပ်ထဲမှာမရှိကြောင်း (အလုပ်မှာ စိတ်မပါကြောင်း) အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
သူဟာ့  အရည်အသွေးမကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုရင်း ဖြစ်ကတတ်ဆန်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြှုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို အဆုံးသတ်ဖို့ ဆိုးဝါးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
လက်သမားဆရာ သူ့အလုပ် ပြီးဆုံးတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ အလုပ်ရှင်သူဌေးဟာ အဲဒီအိမ်ကို လာရောက်စစ်ဆေး ကြည့်ရူ့ပါတယ်။
Then he handed the front-door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you."
အဲဒီနောက် သူဟာ(သူဌေးဟာ) အိမ်ရှေ့တံခါးသော့ကို လက်သမားဆရာထံ ကမ်းပေးရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဒီအိမ်ဟာ ခင်ဗျားအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်ရဲ့ လက်ဆောင်ပေါ့ဗျာ။”
ဒီအိမ်ကို သူ့အတွက် တည်ဆောက်နေတာလို့ (ကြိုတင်ပြီး) သိရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုမျိုး တည်ဆောက်ခဲ့မိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။( ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် တည်ဆောက်ခဲ့မိမှာပါ)
elderly(adj ) သက်ကြီး။ သက်ကြီးရွယ်အို။
carpenter( n ) လက်သမား။ လက်သမား အတတ်၊ လက်ရာ။
retire( v )အငြိမ်းစား ယူသည်။ ပင်စင်ယူသည်။ (သီးသီးသန့်သန့်၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာ) သွားနေသည်။
leisurely(adj.) ကဗျာကယာမဟုတ်သော။ စိတ်အားလပ်နေသော (adv) ကမန်းကတန်း မဟုတ်ဘဲ။
extended family အနီးနေ ဆွေမျိုးများပါဝင်သည့် မိသားစု။
paycheck (n)လစာဘောင်ချာ။ လစာ။
get by (Idm) ကျော်ဖြတ်သွားသည်။ အောင်သည်ဆိုရုံမျှ အောင်မြင်သည်။
personal(adj )ကိုယ်ရေး။ ကိုယ်တိုင်။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ။ ကိုယ်ပိုင် (သို့) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။
favour n ( US favor) ထောက်ခံမှု။ လက်ခံမှု။ အကူအညီ။ ဘက်လိုက်မှု။ အကူအညီ။ အခွင့်အရေးပေးခြင်း။
resort(n) အသုံးပြုခြင်း၊ အပန်းဖြေစခန်း။ (v)ရွေးချယ်စရာအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
shoddy(adj )အနုပ်စုတ်ကုပ်စုတ်။ ကရော်ကမည်။ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း။
inferior( adj )ညံ့သော။ နိမ့်ကျသော။ သိမ်ငယ်သော။ (n) လက်အောက်။ လက်အောက်ငယ်သား။
dedicated (adj)(မိမိကိုယ်ကို) အလုပ်၊ ရည်မှန်းချက် စသည်တွင် နှစ်မြှုပ်ထားသော၊ မြှုပ်နှံထားသော။
unfortunate(adj )ကံမကောင်းသော။ ကံခေသော။ မသင့်သော။ အကြောင်းမလှသော။ ဆိုးသော။
different( adj )မတူသော။ အသစ်။ ထူးခြားသော။ ကွဲပြားသော။ ဆန်းသစ်သော။
Wisdom English Magazine , Jan, 2013 ထုတ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပြီး...
ကျန်ရှိသည့် စာမူများကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမည်။
Posted by နေလင်းအောင် at 5:38 PM
Labels: ဘာသာပြန် အလေ့အကျင့်